Iincwadi zamabali ezibalaseleyo zesayensi
ukuwa kwemenyu yomntwana
yandisa imenyu yomntwana
Uphengululo lweNoveli yeNzululwazi
Ukuphazamiseka, nguRichard Powers
Ihlabathi liphumile kumculo kwaye kungoko kukho ukubhideka (uxolo ngesiqhulo). I-Dystopia iyasondela ngenxa yokuba i-utopia yayihlala ikude kakhulu kwimpucuko efana neyethu eyanda ngokukhawuleza ngenani njengoko isazisi esiqhelekileyo sincipha. Umntu ngamnye unendalo ukuba abekho. ...
Inkwenkwe kunye nenja yakhe ekuphelisweni kwehlabathi, ngu-CA Fletcher
Iintsomi ze-post-apocalyptic zihlala zibeka umba ophindwe kabini wentshabalalo epheleleyo kunye nethemba lokuzalwa kwakhona. Kule meko, uFletcher ukwatsala imizobo ecacisa ukuba ifike njani kwinto engaqhelekanga apho abasindileyo banoxanduva lokwakha kwakhona ilizwe labo ...
Shiya umhlaba ngasemva, nguRumaan Alam
Ukubalekela eLong Island akukaze kude ngokwaneleyo ukuba kungabikho nto. Unokuba luncedo ukuba uzama nje uxinzelelo emva kweveki enzima yedabi kwisiXeko saseNew York; kodwa sisicwangciso esibi ukuba sisiphelo sehlabathi, iapocalypse okanye ...
Ukusondela… Icandelo loMphathiswa wexesha elizayo, uKim Stanley Robinson
Ukusuka kwi-Ofisi yoMphathiswa Wothando ka-George Orwell ukuya kwi-Ofisi yoMphathiswa wexesha, uthotho lwamva nje oluphumeleleyo kwi-TVE. Umbuzo kukudibanisa abaphathiswa kunye ne-dystopian, imicimbi yexesha elizayo kunye nenqaku elibi ... Iya kuba ngumcimbi wabaphathiswa ukuba benze imisebenzi emnyama eyabelwe iibhegi zabo zesikhumba ...
Indlala, ngu-Asa Ericsdotter
Iimpawu ezivuyisayo ngokugqwesa ziidyopopias zento enokuba yiyo. Kuba indlela ye-dystopian ihlala inento enkulu kwezentlalo. Bonke babonakaliswe kulungelelwaniso olutsha kunye neenzame zabo zemvukelo kunye nokungeniswa koloyiko. Ukusuka kuGeorge Orwell ukuya kuMargaret Atwood uninzi lwababhali abakhulu ...
Oryx kunye neCrake, nguMargaret Atwood
Ukufunyanwa kwakhona kweengcinga ezintsomi zentsomi kungabikho mabali amatsha onokondla okucingelwayo phakathi kwe-dystopian kunye ne-post-apocalyptic ngokuhambelana namaxesha. NguMargaret Atwood kuphela ongumbhali weentsomi oqhelekileyo. Kuye, imeko-bume ihamba kunye nemibono ngakumbi ...
I-Anomaly, nguHervé Le Tellier
Ukuhamba ngenqwelomoya ngumhlaba (okanye endaweni yesibhakabhaka) kulinyelwe ukuqatshelwa kwesayensi. Inye kuphela into ekufuneka siyikhumbule intsomi ye-Bermuda Triangle, ethi kungekudala iginye iinqanawa ezifana nabalwi bemfazwe, okanye ii-langoliers ze Stephen King ezazidla umhlaba...
Baza kurhaxwa ziinyembezi koomama babo, nguJohannes Anyuru
Intsomi yenzululwazi ngamanye amaxesha ayinjalo. Kwaye kunomdla xa kufikwa kubutyebi, ukuqokelela okanye ukuzithethelela ngokulula. Umbhali uJohannes Anyuru, ungene kwinoveli enomoya wokuhlola oqhelekileyo kwimeko yakhe njengembongi edityanisiweyo, umbono kukuphinda ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha7 Elandelayo →